प्रधानमन्त्री ओलीको मूल्याङ्कन चाहिँ कसले गर्ने ? मूल्याङ्कनका मापक के - के हुन् ? - Kantipath.com
प्रधानमन्त्री ओलीको मूल्याङ्कन चाहिँ कसले गर्ने ? मूल्याङ्कनका मापक के – के हुन् ?
पछिल्लो साता मन्त्रीमण्डल परिवर्तनको चर्चाले निकै उचाइ लियो । मिडिया, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म तताएको विषयको परिणाम आउँदासम्म भने जनताको मनमा बढेको प्रधानमन्त्री ओली प्रतिको विश्वास लगभग शून्यमा झरेको छ ।
कार्यसम्पादन मुल्यांकन मा अब्बल मानिएका गोकर्ण बिष्टलाई पनि पूर्वाग्रहको आधारमा हटाएपछि शंकाको सुइ प्रधानमन्त्री ओली तर्फ़ सोजिएको छ ! मुल्यांकनको मापक के हो ? बिना मगर पास हुने परिक्षामा गोकर्ण, लालबाबु कसरि फेल भए ? कि प्रश्नपत्र फरक फरक थिए ? कि उत्तरपुस्तिका परिक्षन गर्नेले परिवारवादको चर्को पावरवाला चस्मा लगाएका थिए ?? प्रधानमन्त्रिको मुल्यांकन कसले गर्छ ?
मलेशिया रोजगारीमा भएको ठगी विरुद्ध गरेको कार्बाही, म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम बढाउने निर्णय, मलेशियामा शुन्य लागतमा कामदार पठाउन त्यहाँको सरकारसँग गरेको श्रम समझदारी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरुवात, सातै प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सेवा शुरु, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन, नेपालमा पहिलो पटक श्रम अडिटको व्यवस्था ! के यी सबै गोकर्ण बिष्टले लेखेका सहि प्रश्नका गलत उत्तरहरु थिए ? या मेलम्ची बाट ठेकेदार लखेट्नु सहि जवाफ थियो ?
Previous Previous post: President Bhandari administers oath of office and secrecy to newly appointed ministers
Next Next post: अन्तत: कानुनीरूपमै टुट्यो अर्जुन र मेहरको सम्बन्ध